बहु गुहा मोल्ड निर्माता र आपूर्तिकर्ता - चीन बहु गुहा मोल्ड कारखाना
8 cavities इलेक्ट्रॉनिक प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड
अधिकांश ग्राहकहरूले बहु गुहा मोल्डलाई प्राथमिकता दिन्छन् किनकि यसले धेरै उत्पादन लागत बचत गर्न सक्छ, तर निर्णय गर्नु अघि तपाईंले केही कारकहरू विचार गर्नु आवश्यक छ।
C Cavity प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड
जब तपाइँको बहु-गुहा इंजेक्शन मोल्डको डिजाइनको कुरा आउँदछ, सटीकता र स्थिरता गुणस्तरका समाप्त भएका उत्पादहरूका कुञ्जी हुन्।
C 48 Cavities घरेलू उपकरण इन्जेक्शन मोल्ड
यदि उत्पादनको आकार सानो छ भने, सामान्यतया २ or वा c 48 गुहा बनाउँदछ, किन यो भन्नु पर्दछ कि or० वा c० गुहा बनाइएको छैन।
यो किनभने मोल्ड लेआउट र सामग्री भरने सन्तुलन सन्तुलनको लागि हो, विशेष गरी चिसो धावक मोल्डमा जब प्रयोगमा हुन्छ।
बहु गुहा मोल्ड भनेको के हो?
बहु-गुहा मोल्ड भनेको एक इन्जेक्शन मोल्ड हो जुन एउटै भागको एक भन्दा बढी गुहा हुन्छ, र मोल्ड प्रत्येक उत्पादन क्रममा समान भागको गुणा उत्पादन गर्न डिजाइन गरिएको हो।
बहु-गुहा इन्जेक्शन मोल्डहरू अक्सर उच्च भोल्युम उत्पादनहरूका लागि प्रयोग गरिन्छ किनकि यसले तपाईंलाई चक्र समयको अधिक कुशल प्रयोग गर्न र शट ग्यारेन्टी भित्र समान मोल्डबाट थप भागहरू उत्पादन गर्न अनुमति दिन्छ।
बहु-गुहा इंजेक्शन मोल्डहरूको के फाइदा?
एक बहु-गुहा मोल्डले एउटै भागमा बहु गुहाहरू समावेश गर्दछ। यसले प्रत्येक इन्जेक्शन मोल्डिंग चक्रमा ठूलो संख्यामा भागहरू उत्पादन गर्न सक्दछ, जुन सामूहिक उत्पादनको लागि एकदम उपयुक्त छ। केहि अन्य स्पष्ट लाभहरु:
छोटो डेलिभरी समय: किनकि धेरै भागहरू प्रत्येक चक्रमा पूरा गर्न सकिन्छ, कोटाहरू छिटो पुग्न सकिन्छ।
मोल्ड लागत घटाउनुहोस्: चार अलग मोल्डहरू बनाउनको तुलनामा, चार गुहासँग मोल्डहरू सस्ता छन् र स्वामित्वको कम लागत छ।
तल्लो भाग मूल्य: बहु-गुहा मोल्डको कुल श्रम र मेशीन समय छोटो छ, जसले भागको मूल्य कम गर्दछ।
अर्डर स्केलेबिलिटी: एकल गुहा मोल्डको साथ १० लाख भागहरूको माग पूरा गर्न गाह्रो छ। बहु-गुहा मोल्डहरूले तपाईंलाई समयमा ठूलो अर्डरहरू राख्न अनुमति दिन्छ।
एकल मोल्ड VS. बहु-गुहा मोल्ड, जुन तपाईंको परियोजनाको लागि उत्तम हो?
एकल गुहा मोल्डले एकल चक्र उत्पादन गर्दछ, जबकि बहु-गुहा मोल्डले प्रति चक्रमा एक भन्दा बढी उत्पादनहरू उत्पादन गर्दछ।
सामान्यतया, एकल वा बहु गुहा मोल्ड छनौट तपाइँको समयसीमा र माग मा निर्भर गर्दछ। जब ठूलो मात्रा उस्तै भागहरू निर्धारित समय सीमा भित्र आवश्यक हुन्छ, बहु गुहा मोल्ड प्राय: राम्रो विकल्प हुन्छ। बहु-गुहा मोल्ड मोल्डहरूले अधिक भागहरू सिर्जना गर्न सक्षम गर्दछ, शट ग्यारेन्टी भित्र छिटो।
यद्यपि बहु-गुहा मोल्ड सबै परियोजनाहरूका लागि उत्तम विकल्प होइन। एक बहु-गुहा मोल्डको लागि एकल-गुहाई मोल्ड भन्दा बढि पर्याप्त अपस्ट्रन्ट लगानी आवश्यक पर्दछ। बहु-गुहा मोल्डहरू बनाउन यो अधिक लागत-गहन छ किनकि तिनीहरूलाई एकल-गुहा मोल्ड भन्दा बढी सामग्री, श्रम, र ऊर्जा स्रोतहरू आवश्यक छ।
यदि उच्च खण्डमा भागहरू उत्पादन गर्दै, बहु-गुहा ईजेक्शन मोल्डमा लगानी निश्चित रूपमा भुक्तान गर्न सक्दछ।
तर कम भोल्युममा, यसले एकल-गुहा मोल्डको लागि अधिक अंगीकार गर्न सक्दछ।
बहु-गुहा मोल्डहरू VS. परिवार ढाँचाहरू:
तपाईको आवश्यकताको लागि कुन चाहिँ उत्तम छ? मल्टि-गुहा ईन्जेक्शन मोल्डहरू कहिलेकाँही परिवार ईन्जेक्शन मोल्डका साथ भ्रमित हुन्छन्, तर ती दुई फरक छन्।
जबकि एक परिवार इंजेक्शन मोल्डले बहु गुहाहरू पनि समावेश गर्दछ, ती गुहाहरू समान हुँदैनन्, तिनीहरू एकल रनमा उत्पादको विभिन्न कम्पोनेन्टहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गरिन्छ।
यद्यपि पारिवारिक मोल्डले बहुविध गुफाहरू पनि समावेश गर्दछ, उत्पन्न गरिएको भागहरूले समान आकार तर फरक डिजाइनहरू साझा गर्दछन्। उदाहरण को लागी, यदि तपाईंको भाग लाई लगभग बराबर आकारको दुई फरक भागहरू आवश्यक छ भने, तपाईं यो उपकरणलाई उहि समयमा उत्पादन गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा बहु-गुहा मोल्डको उस्तै फाइदाहरू छन्, तर केहि अन्य फाइदाहरू छन्:
• कम कुल टुलि bud बजेट
Or दुई वा अधिक कम्पोनेन्टहरू एक इन्जेक्शन चक्रमा उत्पादित भएपछि उत्पादकता बढ्छ
• कम भोल्यूम अर्डर सम्भाव्य: परिवार ईन्जेक्शन मोल्ड कम-मात्रा अर्डरहरूको लागि लागत प्रभावी छन्, किनकि विभिन्न मोल्डहरू चलाउन आवश्यक पर्दैन।
Prot प्रोटोटाइपको लागि आदर्श हो, किनकि एक उत्पादन मात्र एक परिवारको मोल्ड प्रोटोटाइप प्रयोग गरेर पूर्ण रूपमा भेला हुन सकिन्छ, यसले पूर्व उत्पादन लागतमा कटौती गर्न सक्दछ।
यद्यपि पारिवारिक मोल्डमा गुफाका बिभिन्न आकारहरूको कारणले, पार्ट प्रोडक्शनको दौरान स्थिरता कायम गर्न धेरै गाह्रो हुन सक्छ, जसले गर्दा मोल्डिंग त्रुटिहरूमा तपाईंको जोखिम बढ्छ।
कस्टम मोल्ड, धातु सम्मिलितको साथ इंजेक्शन मोल्डिंग, मोल्ड कारखाना, प्रोटोटाइप मोल्ड निर्माताहरू, मोल्ड निर्माताहरू, प्लास्टिक घुसाउनुहोस्,